थाहा खबर: सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राजपामा विवाद, यादव र झाको फरक मत
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राजपामा विवाद, यादव र झाको फरक मत
'सरकारमा नजाने भए केका लागि राजनीति?'
काठमाडौं : संविधान संशोधनको माग पूरा भए सरकारमा जाने बताउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) अझै पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको छ। संविधमान संशोधनको माग गर्दै आएको अर्को मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भए पनि राजपा भने अझै अन्योलमै छ।
मधेस केन्द्रित दल राजपा र फोरमको मुख्य माग संविधान संशोधन हो। सरकारले संविधान संशोधन आपसी छलफलमा गर्ने बताएपछि फोरम सरकारमा जान तयार भयो तर राजपाभित्र भने अहिले सरकारमा जाने विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छैन। नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको भए पनि औपचारिक छलफल भने पाएको छैन।
राजपाले भने संविधान संशोधनबाहेक रेशम चौधरीको कुरा पनि अघि सारेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर- १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरी अहिले पनि टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा जेलमा छन्। जनताबाट अत्यधिक मत प्राप्त जनप्रतिनिधिलाई जेलमुक्त गरेर शपथ ग्रहण गराइनुपर्ने राजपाको माग छ। ‘फोरमले संविधान संशोधनको माग मात्र राखेको थियो। उसको मागमा सरकारसँग सहमति भएको छ’, राजपा महासचिव केशव झाले भने, ‘हाम्रो अर्को माग जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहण गराइनुपर्छ, जेलमुक्त गराएर मुद्दा हेरिनुपर्छ भन्ने हो।’
यस्तै, राजपाले सरकारमा सहभागी हुनका लागि संविधान संशोधनको समय अवधि पनि तोक्नुपर्ने माग राखेको मधासचिव झाले बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि पहिला पनि प्रतिवद्धता भए। हामीले चाहिँ संविधान संशोधनको समय अवधि पनि खोजेका हौँ। कहिलेसम्म संशोधन हुन्छ, यसमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ।’
आफूहरूले सबै बुँदा संशोधनको माग नराखेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘केही नेताहरूले संविधान स्वीकार्य भयो पनि भनेका छन्। हामीले पनि संविधान नै अस्वीकार नगरेका होइनौँ। केही बुँदा छन्। ती बुँदालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौँ।’
सरकारमा सहभागी नभएसम्म संविधान संशोधन नहुने भएकाले पनि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य माग संविधान संशोधन हो। संविधान संशोधनका लागि भए पनि हामी सरकारमा जानुपर्छ।’
सरकारमा जाने विषयमा राजपामा दुई धार
राष्ट्रिय जनता पार्टी गत वर्ष मात्र स्थापना भएको पार्टी हो। संविधान जारी भएयता मधेसका मुद्दा उठाउँदै गठबन्धन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न छ पार्टी मिलेर राजपा स्थापना भयो। पार्टीमा नयाँ प्रयोग पनि भयो। एउटै पार्टीमा छ अध्यक्ष। छ अध्यक्षको एक संयोजक तोकियो। तर सुरुदेखि नै राजपामा सानातिना विवाद आइरहेका थिए।
स्थापनाको समयमा संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको थियो। राजपाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विवाद पनि कायमै थियो। एक समूह निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा थियो भने अर्को समूह निर्वाचनमा सहभागी हुन नहुने भन्ने पक्षमा थियो। त्यही विवादका बीच प्रदेश २ का स्थानीय तहमा तेस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा राजपाले भाग लियो।
यस्तै, प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि राजपाले भाग लियो। ‘निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि त विवाद थियो। निर्वाचनमा भाग नलिएको भए हाम्रो माग कसरी पूरा हुन्थ्यो?', राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘अब माग पूरा गराउन पनि सरकारमा जानुपर्छ।’
निर्वाचनमा जस्तै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राजपाभित्र विवाद छ। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य पनि सरकारमा जाने विषयमा एक हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ। अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव र अनिल झा सरकारमा जाने विषयको विपक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ। अन्य सदस्य भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ।
‘कोहीकोही साथीहरूको इच्छा फेरि आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने छ’, एक नेताले भने, ‘आन्दोलनमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ध्यान आकर्षण हुन्छ र चर्चामा आइन्छ भन्ने छ तर त्यसरी मात्र राजनीति हुँदैन।’ राजपाभित्र एक पक्षले सत्तामा जानकै लागि राजनीति भएको बताउँदै आएका छन् भने अर्को पक्षले सत्तामा जान नहुने बताउँदै आएका छन्। ‘सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्ने भयो भने त सरकारमा जाने नै हो’, ती नेताले भने, ‘सरकारमा नजाने हो भने केका लागि राजनीति गर्नु? एनजिओ खोलेर बसे भइगयो नि!’
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झा भने पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको बताउँछन्। सरकारमा जाने\_नजाने विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल नभएकाले कुनै विवाद नै नरहेको झाको भनाइ छ। भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई वार्तामा बोलाएको छैन। व्यक्तिगत आधारमा कसलाई बोलायो, त्योचाहिँ हामीलाई थाहा भएन।’
अहिलेसम्म राजपा प्रतिपक्षमै रहेका कारण माग पूरा नभएसम्म प्रतिपक्षमा नै रहिरहने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘संविधान संशोधनका लागि हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ तर हामी अहिले प्रतिपक्षमै छौँ।’
झाले यसो भनिरहँदा राजपाभित्र भने ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा पनि चल्न थालिसकेको छ। स्रोतका अनुसार आफू मन्त्री हुन नपाउने भएपछि अनिल झा र महेन्द्र राय यादव सरकारमा जान हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। पार्टीभित्रबाट अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो र अर्का सदस्य शरदसिंह भण्डारी मन्त्रीको रूपमा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा रहेको पार्टीको उच्च स्रोतले जनाएको छ।